“Messi waxa uu ka tagi doonaa PSG waqtigan” – Halyeey Barcelona ah – Gool FM
“Messi waxa uu ka tagi doonaa PSG waqtigan” – Halyeey Barcelona ah
Dajiye January 7, 2022
(Madrid) 07 Jan 2022. Halyeeyga Barcelona Lobo Carrasco ayaa muujiyay fikirkiisa ku aadan in Lionel Messi uu ka tagi doono kooxdiisa haatan ee Paris Saint-Germain hadii uu ku guuleysan waayo Champions League.
Messi ayaa soo afjaray mustaqbalkiisa Barcelona bishii Ogosto ee la soo dhaafay, kahor inta uusan maalmo kaddib ku biirin kooxda Paris Saint-Germain, taasoo dooneysa inay ku tiirsanaato si ay ugu guuleysato tartanka Champions League, oo ah tartanka ugu muhiimsan ee heer kooxeed.
Wargeyska Marca ee dalka Spain ayaa daaha ka qaaday wareysiga Halyeeyga Barcelona Lobo Carrasco, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Champions League waa furaha joogitaanka Lionel Messi ee kooxda Paris Saint-Germain.”
“Haddii Messi uu Champions League kula guuleysto Paris Saint-Germain, wuxuu sii joogi doonaa sanad dheeri ah.”
“Haddii Paris Saint-Germain aysan ku guuleysan Champions League, markaas sanadka wuxuu noqon doonaa waqti aad u dheer, wuuna bixi karaa June.”
Paris Saint-Germain ayaa kula ciyaari doonta Real Madrid wareega 16-ka ee tartanka Champions League, waxaana lugta hore lagu ciyaari doonaa 15-ka February garoonka Parc des Princes ee magaalada Paris, halka lugta labaad ay ka dhici doonto garoonka Santiago Bernabeu 9-ka March.
PSG ayaa rajeyneysa inay soo gabagabeyso inkaarta ka heysata hanashada Champions League, iyada oo kooxda in ka badan hal jeer isku dayday inay ku guuleysato koobka tartankan, inkastoo ay gaartay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay kii ka sii horeeyay kulanka kama dambeysta ah ee finalka, oo ay guuldarro ka soo gaartay Bayern Munich.
Agbonlahor oo tilmaamay sababta uu Ronaldo uga careysan yahay Manchester United
“N'Golo Kanté waa lagu dulmiyay tartanka abaal-marinta Ballon d'Or” – Joe Cole